ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကယ်ရီလမ်းက ဂျွန်လီအား ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းအပေါ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြု - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (HKSAR) အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခံရသော John Lee အား မေ ၈ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဟောင်ကောင် ၊ မေ ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ(HKSAR) အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကယ်ရီလမ်းက ဂျွန်လီအား HKSAR ၏ ဆဋ္ဌမသက်တမ်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသည့်အပေါ် မေ ၈ ရက်တွင် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။၎င်းအနေဖြင့် ဗဟိုပြည်သူ့အစိုးရထံသို့ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်အစီရင်ခံစာတစ်စောင် တင်သွင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကယ်ရီလမ်းက ကြေညာချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကယ်ရီလမ်း နှင့် လက်ရှိ HKSAR အစိုးရအဖွဲ့သည် ဂျွန်လီနှင့်အတူ ချောမွေ့သောအသွင်ကူးပြောင်းမှုအား သေချာအောင်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်တွင် အစိုးရအဖွဲ့သစ် သက်တမ်းသစ် တာဝန်ယူခြင်းအတွက် လိုအပ်သည့် ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုများအားလုံးကို ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
HKSAR အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဂျွန်လီသည် မေ ၈ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိရန် သတ်မှတ်မဲအရေအတွက် ၇၅၀ အား ကျော်လွန်ကာ စုစုပေါင်းမဲအရေအတွက် ၁,၄၁၆ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
HONG KONG, May 8 (Xinhua) — Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) Carrie Lam on Sunday extended congratulations to John Lee on his election as the HKSAR’s six-term chief executive designate.
Lam said inastatement that she will submitareport of the election results to the Central People’s Government.
Lam added that she and the current-term HKSAR government will ensureaseamless transition with Lee, and render all the support needed for the assumption of office by the new term of government on July 1.
Lee, former chief secretary for administration of the HKSAR government, wonatotal of 1,416 votes, surpassing the threshold of 750 votes to win the chief executive election of the HKSAR on Sunday. ■
Photo – John Lee is elected as the Hong Kong Special Administrative Region’s sixth-term chief executive designate in Hong Kong, south China, May 8, 2022. (Xinhua/Lui Siu Wai)
“တစ်နိုင်ငံ စနစ်နှစ်မျိုး”၏ကဏ္ဍသစ်ဆီသို့ အားမာန်အပြည့်နှင့် တူစုံလက်ညီ တက်လှမ်းချီ